मतदान भइरहेका बेला विमानस्थलमा भेटिएका मानसिंहहरु... - kaligandaki Khabar
मतदान भइरहेका बेला विमानस्थलमा भेटिएका मानसिंहहरु...
रमेश लम्साल, अशोक घिमिरे र कृष्णराज गौतम, काठमाडौँ, ३० वैशाख । उमेर साढे आठ दशक । शुक्रबार देशभर स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान भइरहेका बेला छोराबुहारीलाई बिदाई गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्ष अगाडि टोलाइरहनुभएको थियो काठमाडौँ बनस्थलिका मानसिंह विष्ट ।
आफ्नो झोला खोतल्दै एक अमूक पार्टीको स्टिकर निकाल्नुभयो । तर, राजनीतिक नेतृत्वप्रति गुनासो गर्न पनि छाड्नु भएन । राहदानी नै नभइ विदेश उड्न पाइएला त ? उहाँको जिज्ञासा थियो । हामीले राहदानी नभइ विदेश उड्न नपाइने बताएपछि हामीले नै होटलको नम्बर पत्ता लगाइदियौँ ।
होटल सञ्चालकले राहदानी ल्याइदिने बताएपछि ढुक्क देखिनु भएका पौडेल पनि निर्वाचनको दिन विदेश जानु बाध्यता भएको बताउनुहुन्छ । “खाडी जान्छु भन्दा पनि वातावरण भएन” उहाँले भन्नुभयो । गाँउको विकास निर्माणको काममा राजनीतिक नेतृत्वले गरेको बदमासी आँखा चिम्लेर बस्ने कार्यकर्ताप्रति समेत उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
विमानस्थलमा कोही आफ्ना छोरा बिदाई गर्न आएका आमाहरु भेटिए । कोही श्रीमान् बिदाई गर्न लालाबाला बोकर आएकाहरु पनि भेटिए । देशमा लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको बेला विमानस्थलमा भेटिएका कोही कसैको मनमा पनि खुसी देखिँदैनथ्यो । निराश, हतास अनि मलिन अनुहारमा भेटिएका अधिकांशले देश बनोस्, देशभित्रै रोजगारी पाइयोस् भन्ने अपेक्षा भने गरेका थिए ।
दुखित मन लिएर उड्नेहरु कति खुसी भएर फर्केलान् कति अझै दुःख भोगेर फर्केलान् त्यो भने अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, यसरी देशमा चुनाव भइरहेकै बेला विदेशीने रहर भने कसलाई पो होला र ?
प्रकाशित मिति :वैशाख ३०, २०७९ शुक्रबार - १७:४६:३३ बजे
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेनाको उच्च प्राथमिकतामा